စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း: သငျသညျအဘယျသို့ Vaper ၏ Type နေရာမှာဖြစ်ကြသည်?	Preferred Weapon of Choice?
Subtanks	E cigs	Whatever Chucks Furthest	I Build, bro	Correct!
12+ မီလီဂရမ်	6မီလီဂရမ်	3မီလီဂရမ်	0မီလီဂရမ်	Correct!
ငါအတွင်းအပြင် ရှိ. မိုဃ်းတိမ်တို့ကိုမှုတ်	Outside w the smokers	အဘယ်သူမျှမ, never	A cloud follows me wherever I go	Correct!
Vapemail	It looks cool	The E juice flavors	I educate the youth	Correct!
Menthol	Good Ol' Tobacco	Fruits	Desserts	Correct!
Related ပို့စ်များနိုဝင်ဘာလ 2, 2015သင်ကဆေးလိပ်သောက်တဲ့အခါမှာ Quit မူမည်?ပိုပြီးဖတ်ပါသြဂုတ်လတွင် 31, 2015စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်း: မဟုတ်သော E ကိုဖျော်ရည်အရသာပါဝင်ပစ္စည်းများပိုပြီးဖတ်ပါ	တစ်စာပြန်ရန် Leave ပြန်ကြားချက် Cancel	သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်. တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားနေကြသည် *မှတ်ချက် နာမကိုအမှီ * အီးမေးလ်က * website က သတင်းလွှာသည်ငါ့ကို sign up ပြုလုပ်!
Happy #420 celebrate with some of our #weedejuice completely legal in all 50 states. #vape… https://t.co/Hxm6bTIZEx272 days ago#Vapers have been raving about our #420ejuice have you tried it? https://t.co/6JmhNBIhc2 https://t.co/xDjBF9y0Lt277 days ago#ejuice so good it makes you wanna touch yourself #VapeFamily #VapeFam #vapelyfe #vapefun… https://t.co/jY2SPx8vEl285 days ago